Iindaba -I-Alibaba iphinda ibuyise iTmall kuMazantsi mpuma e-Asiya, i-Lazada brand mall iLazMall iphuculwe
IAlibaba ibuyisela kwakhona iTmall kuMazantsi mpuma eAsia, iLazada brand mall LazMall iphuculwe
Umnyhadala wonyaka wokuthenga weLazada 9.9 wasungulwa ngokusesikweni kumazwe amathandathu mpuma Asiya. Ukwahluka kwiminyaka edlulileyo, uLazada wabhengeza ngokusesikweni uhlaziyo olutsha lwevenkile yakhe ephambili yeLazMall, ngexesha lomnyhadala we-9.9 wokuthenga kulo nyaka. Nceda iimveliso, abathengisi kunye nabasasazi abagunyazisiweyo banxibelelane nabathengi abangaphezulu kwesigidi se-70 kwiqonga leLazada lokwakha iqonga le-e-commerce leemarike zehlabathi ukuphumelela imakethi ese Mpuma mpuma Asia.
ILazada ithathwa njengenguqulelo yoMzantsi-mpuma ye-Asia ye- "Tmall", eluhlaziyo olutsha kraca olusungulwe nguLazMall. Ukongeza ekumiliseleni igama elitsha kraca, izinto ezine ezintsha eziquka ukubetha ixabiso, iiBrand zakho, iBrazil Directory, kunye ne "Follow" Feature Feature nazo ziye zaziswa eMzantsi-mpuma Asia. ILazada ikwaseke imigaqo-nkqubo yembuyekezo kuMazantsi mpuma eAsia ukuqinisekisa ukuba iimpahla ezithengiswa eqongeni ziyinyani.
I-LazMall ibonelela ngeemveliso ngesisombululo esinamandla se-e-commerce, esenza ukuba kube lula kwiimveliso ezintsha ukuvula iivenkile eLazada. Amanqaku anokungena kwinkqubo yabo yokunyaniseka kwiqonga leLazada. Ngophando, ingcebiso kunye nemisebenzi yokusasaza bukhoma yeLazLive exhaswa sisiseko sobuchwephesha beLazada, kunye nezixhobo zokusebenza zikaLazada kunye nokusebenza kwesivumelwano eSoutheast Asia, iya kuzisa abathengi ngamava angaqhelekanga okuthenga.
I-LazMall yindawo ekuthengiswa kuyo kwi-Intanethi kwi-Southeast Asia. Inani leemveliso zabahlali likhule ngaphezulu kwamaxesha alithoba ukusukela oko lasekwa kwi-2018. Kwikota yesibini ye-2020, inani leemveliso ezijoyina iLazMall lingaphezulu kokuphindeka kabini ngonyaka, kwaye ii-odolo kule kota zingaphezulu kokuphindwe kathathu ixesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Iivenkile zesebe kunye namaziko eevenkile kuMazantsi mpuma Asiya nawo akhawulezisile isantya sokungena kwabo kwiLazMall. Okwangoku, iimveliso ezaziwayo ezijoyine iLazMall zibandakanya abathengisi abangama-30 eMarina Square eSingapore kunye nabarhwebi abangama-40 kwiziko leSiam eThailand. Iimpawu ezifana noMqeqeshi, iHimalaya, iMINISO, iCoyan, i-Starbucks kunye ne-Under Armor nazo zijoyine iLazMall kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo.
Okwangoku, ngaphezulu kweempawu ezili-18,000 ezihleli eLazMall. Ngokwedatha, ngaphezulu kwe-80% yeebranti kuluhlu lwegama lomthengi weForbes zihlala eLazMall.
Ukuqinisekisa ukuba iimpahla ezithengiswa eqongeni ziyinyani, i-LazMall ikwenze negatya lembuyekezo kwi-Southeast Asia-ukuba abathengi bathenga iimveliso ezingezizo eLazMall, Thailand naseMalaysia ziya kubonelela ngezihlandlo ezintlanu kwimbuyekezo, iSingapore, iVietnam, I-Indonesia kunye ne-Philippines Intengiso iya kubonelela kabini kwimbuyekezo. Ukongeza, iqonga livumela ukubuyela ngokulula kwiintsuku ezilishumi elinesihlanu.
U-Liu Xiuyun, uMongameli-kunye neNtloko yeQela loShishino lweQela leQela leLazada, uthe: “I-LazMall idlala indima ebalulekileyo kwisicwangciso seshishini sikaLazada. Zombini iimveliso zasekhaya nezamazwe aphesheya zinethemba lokunyusa ifuthe kunye nokukhula kwabo kwi-mpuma ye-Asiya ngendlela ye-omni-channel. Siza kuqhubeka nokutyala imali kwiinkonzo zoncedo ezibalulekileyo kunye namava omsebenzisi ukuxhasa amaqabane ethu ophawu kwaye sibuyise ngcono kubathengi boMzantsi-mpuma Asia. ”
Ukusukela ekubeni liqonga le-e-commerce yeqonga leAlibaba Group kuMazantsi mpuma eAsia e2016, uLazada useke ubuchwephesha obuphambili, ulungiselelo kunye neenkqubo zokuhlawula kuMazantsi mpuma eAsia ngoncedo lukaAlibaba’Isicwangciso-qhinga sehlabathi kunye nezixhobo zedijithali, e-Indonesia, eMalaysia, ePhilippines naseSingapore. Iimarike zamazwe amathandathu, iThailand, kunye neVietnam zonke ziye zaphumelela ukukhula ngokukhawuleza.